धर्म – Namaste Host
जुम्लाको चन्दननाथ मन्दिरबाट चो री भएको एक थान बहु’मूल्य दाहीने शङ्ख चार वर्षपछि भेटिएको छ । वि.सं. २०७३ मंसिर ११ गते चोरी भएका मूर्तिको अ नुसन्धानको क्रममा प्र’हरीले दाहीने शङ्ख भेटाएको हो । तीन दिन अघि दुई थान मूर्तिसहित प’क्राउ परेका तीन आ’रोपितको सहयोगमा बुधबार चन्दननाथ नगरपालिका १० बोहोरागाउँ जुम्लाको खोलापानेस्थित एक ओडारमुनि राखिएको अवस्थामा […]
तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका–३ किल्चोकस्थित निकै पुरानो धार्मिक स्थल अकलादेवी मन्दिरलाई उजिल्याउन स्थानीयवासी जुटेका छन् । यस ठाउँलाई धार्मिक पर्यटनको गन्तव्य स्थल बनाउन सकिने भए पनि प्रचारप्रसारको अभावमा ओझेलमा परेको भन्दै स्थानीयवासी यस ठाउँको प्रचारप्रसारका लागि जुर्मुराएका हुन् । मन्दिरको आफ्नै विशेषता छ, त्यो हो – मन्दिरमा रहेका घण्ट आफैं हल्लिनु । धेरैलाई यो सुन्दा आश्चर्य […]
March 20, 2021 March 20, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on स्त्रीले बिहान उठेर यी काम गर्दा चम्किन्छ भाग्य
तपाईं आफ्नो स्वास्थ्य राम्रो होस् भन्ने चाहानुहुन्छ भने ब्रह्म मुहूर्तमा ओछ्यान छाड्नुहोस् । यदी कोही व्यक्तिको कुण्डलीमा ग्रह सम्बन्धी कोही दोष भएमा भाग्यले साथ दिँदैन । कुण्डलीको दोषाबाट टाढा रहनका लागि ज्योतिष शास्त्रमा कयौँ उपाय अपनाउन सकिने शास्त्रले बताएको छ । शास्त्रमा भनिएको छः वर्ण कीर्ति मन्ति लक्ष्मी स्वास्थ्यमायुश्च विदन्ति । ब्राह्मो मुहूर्ते संजाग्रच्छि वा […]
March 19, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on जती नै सुन्दर भएपनी आफ्नो घरमा नल्याउनुहोस यस्ता तीन तस्विर
एजेन्सी – घरको साज–सज्जामा धेरै जना सौखिन हुन्छन् । अझ घरका विभिन्न कोठामा विभिन्न तरिकाबाट सजाउनु मानिसको सौख नै हुन्छ । जसमा मानिसहरु ठूला–ठूला तस्बिर तथा चित्रकला ल्याएर राख्ने गर्छन् । तर सबै तस्बिर घर वा कोठमा सजाउन योग्य नहुन पनि सक्छन् । कुनै – कुनै तस्बिरले मानिसमा सकारात्मक उर्जा पैदा गराउँछ भने कुनै तस्बिरले […]
March 18, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on जिबनमा एक पटक पुग्नै पर्ने पवित्र तीर्थस्थल,पुग्ननसके पढेर दर्शन गरी सेयर गर्नुहोस
सुत्ने बेला भगवानको दर्शन गर्नुहोस र पढ्नुहोस नसोचेको धनलाभ हुनेछ ।
March 18, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on सुत्ने बेला भगवानको दर्शन गर्नुहोस र पढ्नुहोस नसोचेको धनलाभ हुनेछ ।
धनसम्पत्ति बिनाको जीवन हामी सोच्न पनि सक्दैनौ। तर हामी प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि धन कमाउन सकिरहेको हुँदैनौँ। चाहे जस्तो सम्पत्ति कमाउन, जागीर खान हामीले गारै हुने गर्छ। हिदू धर्मशास्त्र अनुसार यस्तो समस्याको समाधानका लागि शास्त्रहरुमा उल्लेख छ। यस्ता देबी देवताहरुको व्रत बस्नाले जागीर पाउनका लागि सहज हुनेछ। शनिबार शनी देवको व्रत राख्नु पर्दछ। –शनिवार बिहान […]
March 15, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on बिहानीपख किन भगवानको पुजा गर्ने ?
भगवानकाे पूजापाठ सामान्यतया बिहान गरिन्छ । बिहानको समय पूजा गर्नका लागि सबै भन्दा महत्वपूर्ण मानिन्छ । हुन त भगवानको आराधना दिनभर जुन कुनै समयमा पनि सच्चा मनले गर्न सकिन्छ । तर पूजा गर्नुको विशेष महत्व मुहूर्तमा हुन्छ । बिहान-बिहान पूजा गर्दा हाम्रो मन पनि एकाग्र हुन्छ । निद्राबाट उठ्दा मन शान्त र स्थिर रहेको हुन्छ […]
March 15, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on ॐ निःसन्तानलाई सन्तान दिने दुप्चेश्वर महादेवको दर्शन र महिमा पढी सक्दो शे*यर गर्नुहोस्
दुप्चेश्वर महादेवको मेला भर्न राजधानी काठमाण्डौं, धादिङ, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर, गोरखा, चितवन लगायत देशका विभिन्न भागहरुबाट यहाँ वर्षेनी हजारौँ दम्पती भक्तजनहरु महादेवसँग सन्तान माग्न आउने गरेका छन् ।दुप्चेश्वर महादेव मन्दिर नुवाकोट जिल्ला को राउतबेसी गाविसमा अवस्थित धार्मिक पर्यटकीय स्थल हो । विशेषगरी जोडी जुराउन र सन्तान माग्नकै लागी यस स्थानमा भक्तजनहरु दुप्चेश्वर महादेव पुग्ने गर्दछन् […]
March 15, 2021 March 15, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on तपाइले सोचेको ७ दिनभित्रमा काम बन्नेछ, ॐ लेखि सेयर गरौं !
७ दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ, ॐ लेखि सेयर सा’त दि’नभित्’रमा त’पाइले सो’चेको का’म ब’न्नेछ बि’ल्कु’लै बे’वास्ता न’गर्नुहो’ला, ॐ ले’खि से’यर ग’रौं!!!ॐ मात्र उच्चारण गर्नु भयो भने पुरा ब्रमाण्ड्को देबि देबताको श’क्ति हुन्छ। त्यसैले दे’खेको 30 से’केण्ड भित्’रमा शे’यर गर्’नुहोस ।७ दि’न भि’त्रमा त’पाइले न’सोचेको का’म ब’न्नेछ बि’ल्कुलै बे’वस्ता न’गर्नुहो’ला!!!अन्य’था अनि’स्ट हुने’छ बरिस्ठ3जाना […]